Dayuuradda Feeet ee Venezuelan waxay dhiseysaa Dhaqaale - Ellicott Dredges Blog
Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah tusaalooyinka hoggaamineed ee saameynta tooska ah ee qashin-qubka koritaanka dhaqaalaha qaran lagu arki karo Venezuela. Qodaalka dayactirka sanadlaha ee harada Maracaibo iyo wabiga Orinoco ayaa kor u dhaaftay 70 milyan oo mitir cubic. In kabadan 70% waxsoosaarka qaranka ee Venezuela wuxuu ka yimaadaa batroolka laga soo saaray aagagga jiifta harada Maracaibo, taas oo abuureysa taraafikada culus ee booyadaha gala iyo kuwa ka yimaada harada.
Instituto Nacional de Canalizaciones (INC) ayaa mas'uul ka ah, hay'ad dowladeed, inay injineer iyo fuliso dhammaan qodista iyo cilmi baarista la xiriirta iyo injineernimada baddaha Venezuela iyo dekedaha gudaha, dekedaha, marinnada biyaha, iyo harooyinka. INC waxay haysaa raxan u gaar ah iyo qandaraasyada qodista dheeriga ah ee qandaraasleyda gaarka loo leeyahay sida loogu baahdo.
INC waxaa loo sameeyay inay maamusho barnaamij cusub oo qallalinaya si loo qoto dheer loo mariyo kanaalka Harooyinka Lake Maracaibo laga bilaabo celcelis ahaan cagaha 11 illaa qoto dheer oo cagaha 35 ah. Kahor taas shirkadaha shidaalka gaarka loo leeyahay ee ka hawl gala Haro Maracaibo waxay qandaraas ku siinayeen dhammaan qashinka.
Marka lagu daro shaqada joogtada ah ee dayactirka kanaalka harada Lake Maracaibo, INC waxay dib u soo ceshatay aag warshadeed oo cusub oo ku yaal xeebta bari ee Tablazo Bay. El Tablazo, Instituto Venezolano de Petroquimica (IVP) waxaa iska leh mashruuca — diyaarinta goobta, qalabeynta tas-hiilaadyada alaabada iyo alaabada ceyriinka ah, dhismooyinka dekedaha iyo unugyada kiimikada ee aasaasiga u ah isku dhafka adag. .
El Tablazo waxaa lagu soo saaray laba marxaladood. Wadarta maalgashiga dhismaha wuxuu ahaa $ 1.2 bilyan.
Dib u soo celinta qashin-qubka waxaa qabtay "Esequibo“, Nooca Ellicott® nuugista jeex jeexan 20-inji dheecaan dredger waxaa la dhisay-1969 loogu talagalay INC.
Si loo dedejiyo dhammaystirka Mashruuca Tablazo, INC waxay go'aansatay inay soo iibsato qodaal dheeri ah, oo ah a 36 ″ (914mm) waxayna amarka siisay Ellicott International ee Baltimore. Doomaha waxaa loo magacaabay "Carabobo ”kadib dagaalkii caanka ahaa ee gobanimada Venezuela. Carabobo waxaa loo jiiday goobta Mashruuca Tablazo si ay u bilawdo una dhameystirto dib u soo celinta dhirta kiimikada. Ellicott waxay siisay koox ka kooban afar khubaro qodaya si ay u arkaan Mashruuca Tablazo loona hubiyo la kulanka qaybta dhiirigelinta / ciqaabta ee qandaraaskooda marka loo eego waxqabadka ceelka.
Danaha gaarka ah waa sheybaarka Hydraulic iyo Moodel miisaanka harada Maracaibo, oo ku taal Magaalada Maracaibo iyadoo lala kaashanayo Jaamacadda Dhexe ee Venezuela. Dhammaan dhinacyada hawlgallada qallajinta ee kanaalka Maracaibo iyo Mashruuca Tablazo waxaa lagu qaddariyo moodeelada Hawada.
Mashruuc cilmi baaris ah oo ka dhacay MIT (Machadka Teknolojiyada ee Massachusetts) iyo INC waxay ku sameeyeen barnaamij qiimeyn gaar ah Sheybaarka Haydarooliga qaabab kale oo lagu xakameeyo kanaalka Maracaibo. Daraasadda oo cinwaankeedu ahaa “Baaritaannada Goobta ee lagu Go’aaminayo Ilaha Siidhka iyo Soo Gelitaanka Salinity ee Maracaibo Estuary, Venezuela,” waxaa diiradda lagu saaray dhowr su’aalood oo khuseeya qashin-qodkii hore. Waxaa ka mid ah codsiyada qaabka haydarka ee barnaamijka qodidda ee Maracaibo waxaa ka mid ah qiimeynta saameynta qashin-qubka sida Tablazo, habdhaqanka qallafsan ee siling-ka lagu shubto kanaalka iyadoo la adeegsanayo kororka qulqulka ee Zulia, iyo saameynta deegaanka ee isbeddelka socodka biyaha iyada oo loo marayo dhismaha darbiyada badda ama leexashooyinka kale ee qulqulka socodka caadiga ah.
Ururka INC wuxuu si hufan u fuliyaa mashruuc qodista iyadoo loo marayo iskuxirka cilmi baarista, tijaabinta, qiimeynta, iyo u kuurgalida mashruuca laftiisa. INC injineernimada, maaraynta, cilmi baarista iyo qashin qubka dhamaantood waa daqiiqado midba midka kale. Saameynta dhaqaale ee qiil u sameynta dhismayaasha ayaa sidoo kale jirtay in ka badan 700 milyan oo foosto oo batrool cayriin ah oo sanadkiiba mar laga qaado marinka Maracaibo, oo ay ku jiraan in ka badan 3,500 booyadood oo galaya harada, ama 7,000 oo marinka kanaalka ah.
INC waxay soo bandhigaysaa hannaan loogu talagalay dekedaha kale ee waaweyn inay tixgeliyaan marka loo eego lahaanshaha sheybaare hawadeeda u gaarka ah iyo shaqaalaha injineeriyadda oo aad ugu dhow dekedaha xaaladahaas oo ay jiraan horumar joogto ah iyo dayactir joogto ah oo loo baahan yahay. Iyada oo xoogga la saarayo saamaynta wasakhowga iyo welwelka dib-u-soo-celinta dabeecaddii dekedaha, marinnada, iyo xilligan, soo-jeedinta ayaa si aad ah u sii daba socota. Machadka Biyaha ee Venezuelan (INC) wuxuu u qalmaa aqoonsi gaar ah waxa ku saabsan horumarintiisa tiknoolajiyadda qallalan ee Maracaibo.
Waxaa laga soo xigtey Dredging World & Marine Construction